Wasiiru-dawlaha dastuurka Puntland Prof. Jimcaale oo ka mid ah waftiga Puntland ee ka qaybgalaya shirka Copenhagen, kana waramay ajandayaashiisa. – Radio Daljir
Copenhagen, Sept 29 -Wasiiru-dawlaha dastuurka iyo arrimaha faderaalka Puntland Prof. Cabdi Xasan Jimcaale oo ku sugan magaalada Copenhagen ee caasimadda Denemark ayaa ka hadlay kulanka kooxda xiriirka caalamiga ee loo qayaano ICG maanta uga furmi doono halkaasi, kaasoo diiradda lasu saarayo arrimaha Soomaaliya.
Wasiiru-dawlaha oo waraysi gaar ah siinayay idaacadda Daljir ayaa waxaa uu sheegay kulanka inuu yahay mid lagu darsayo xalaadda Soomaaliya iyo heshiiskii Road-Mapka ee dhawaan lagu gaaray magaalada Muqdisho, kaasi oo oo qeexaya wax-qabadka dawladda FKM ah ee Soomaaliya muddada sannadka ah ee soo socota iyo qaabka loo hirgalindoono.
Wasiir Jimcaale, ayaa sheegay kulanka inay kasoo qaybgalayaan masuuliyiin kasocota beesha caalamka iyo doawlaha ku bahoobay kooxda xiriirka caalamiga ICG, waxaana dhinaca Soomaaliya uu sheegay inay kulanka uga qaygalayaan masuuliyiin katirsan dawladda Faderalka oo uu hoggaaminyo R/wasaare Cabdiwali M Cali ?Gaas?, Ahlu-sunnah waljamaaca, dhinaca Puntland ayuu sheegay inay kulanka u matalayaan saddex wasiir oo ay ku jiraan wasiirrada qorshaynta iyo haweenka.
Waxaa uu dhinaca kale uu sheegay Prof. Jimcaale in kulanka uu yahay mid muhiimad gaar ah u xambaarsan maamulka Puntland islamarkaana ay jeedin doonaan khudbad ka tarjumaysa aragtidooda ku wajahan xaaladda Soomaaliya.